Articles tagged 'rita makarau'
Makarau to be replaced by female judge: ED 27 January 2018 HARARE - President Emmerson Mnangagwa gave his clearest hint that he would appoint another female as the new Zimbabwe Electoral Commission (Zec) chairperson following Rita Makarau's surprise resignation, with three female judges being tipped for the high-pressure job, the Daily News can report...
Suspicions as Makarau quits 10 December 2017 HARARE - The shock resignation by Zimbabwe Electoral Commission (Zec) chairperson Rita Makarau — a mere eight months before the country holds its make-or-break national elections next year — has cast a huge shadow on the eagerly-awaited polls, which a fearful opposition want to be monitored by in...
Zanu PF feasts on fear ahead of polls 17 October 2017 HARARE - Ahead of the 2018 elections, Zanu PF has created and designed an intricate “occultist” system that is meant to ensure that opposition politics or discourse is not given any breeding room among the rural folk, which constitute over 65 percent of the of the country's 210 constituencies. ...
ZimRights, ERC intensify voter mobilisation 17 October 2017 HARARE - Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights), Election Resource Centre (ERC) and several civic organisations, drew thousands of people as they launched a national campaign of roadshows to urge people to register as voters. The launch was held at Chigovanyika Shopping Centre in Chitun...
Calls for sweeping electoral reforms 14 October 2017 HARARE - Zimbabwe has a lot of pending legislative reforms before holding free and fair elections, with a leading legal watchdog calling for wide-sweeping amendments to various statutes which stifle freedom of assembly and debate. Legal and Parliamentary watchdog, Veritas, said it was imperati...
Everyone must register to vote, says Tsvangirai 10 October 2017 HARARE - MDC president Morgan Tsvangirai on Sunday spoke to Studio 7's Blessing Zulu ahead of the voter registration blitz that kicks off today. Q: What's your message to Zimbabweans on the voter registration blitz? A: I am saying to the people of Zimbabwe, 2018 is the only opportunity we ...